Screw Water Chiller - China Ningbo Hicon Industry
Unit inoratidza: 1.The Unit rwedu boka chaiwo chigadzirwa, anogona kupa R22, R407C, R134A mhando nhatu refrigerants kusangana nezvaidiwa kunyika dzakasiyana uye kumatunhu. 2.Supre-pose vachikwanisa zvinobva 170KW ~ 4800KW enyu kwazvo selection, inopa chikwata pamwe 1,2,3,4 compressor. 3.The chikwata chatingapiwa 8 mugiredhi Min 12,5% simba murau kugutsa mutengi simba-rokuponesa chinodiwa. 4.The dzakatevedzana chikwata anogona kupa kupisa nokupora functionsof 30%, 50%, 75%, 100% sezvo paminiti ari Re ...
1.The chikwata hwedu kambani chaiwo chigadzirwa, anogona kupa R22, R407C, R134A mhando nhatu refrigerants kusangana nezvaidiwa kunyika dzakasiyana uye kumatunhu.
2.Supre-pose vachikwanisa zvinobva 170KW ~ 4800KW enyu kwazvo selection, inopa chikwata pamwe 1,2,3,4 compressor. 3.The chikwata chatingapiwa 8 mugiredhi Min 12,5% simba murau kugutsa mutengi simba-rokuponesa chinodiwa. 4.The dzakatevedzana chikwata anogona kupa kupisa nokupora functionsof 30%, 50%, 75%, 100% sezvo paminiti nezvaidiwa mutengi. 5.The chikwata adopts mukuru-kuita akakurumbira muchiso uye Semi-hermetic srew compreesor uye yakakwirira kunyatsoshanda goko & chubhu kupisa exchanger.The avhareji COP rinopfuura 4.5.
6.SIEMENS muchiso PLC controller, yakatsiga kuita uye nyore kushanda.
7.The two chilled mvura tembiricha inogona kuchinjwa kubva 5 ℃ kusvika 15 ℃, uye zvinogona kushandiswa maindasitiri kushanda. 8.The chikwata ane zhinji kudzivirirwa mano uye mashandiro, kusanganisira simba dziviriro
(Akadai kushaya-danho, Anti danho,), compressor injini dziviriro, asunungurwa gasi Temp pamusoro-soro kudzivirirwa, yakakwirira / yakaderera kumanikidzwa, Anti nechando, compressor zadzisa dziviriro, mvura Temp overlow kudzivirirwa.
Previous: Zvikazara sikuruwa Water Chiller
Next: Mupumburu Water Chiller
Air dzaserera Screw Chiller Price
Air haachandidi Volt Chiller
Haachandidi Screw Chiller
High vakarongeka Screw Water Chiller
Industrial Water haachandidi Screw Chiller
Screw Air haachandidi Chiller
Screw Marine Water Chiller
Water dzaserera Screw Chiller For Sale
mvura dzaserera Screw Chillers
Water dzaserera Screw Water Chiller
Hot Air Source Total Heat Recovery Water hita ...